Fahasemporana tampoka :: Efatra mirahalahy niara-maty tao an-davapiringa • AoRaha
Fahoriana goavana no nanjo an’ity fianakaviana iray tany Ambatondrazaka, omaly. Tao anatin’ ny fotoana fohy no nifanesen’ny famoizana an’ireto efa-dahy, telo lahy mpiray tampo, sy ny lehilahy faninefany, izay havan’izy ireo ihany. Tao anatin’ny lavapiringan’ny fiangonana Jesosy Mamonjy tany Ambohimiangaly-Ambatondrazaka no nisehoan’ny voina, ny maraina tokony ho tamin’ny 9 ora sy sasany.
Tamin’ny 12 ora vao tafakatra tao amin’ilay lavaka ny razana farany. Nambaran’ny loharanombaovao avy amin’ny mpitandro filaminana, any an-toerana, fa fahasemporana avy amin’ny entona misy poizina tao amin’ity lavapiringa avy namboarina no niteraka ny fahafatesan’izy efadahy.
Fantatra fa nokaramaina hanala an’ireo maloto tao anatin’ ny lavaka izy ireo. Vita soa amantsara ny asa, tokony ho tamin’ny 9 ora. Efa tafakatra taty ambony ry zareo vao nahatsiaro ny fanadinoana ny fitaovana nampiasaina tao ambany tao.
Nisy fitaovana hadino anefa tao anatin’ilay lavaka rehefa tafakatra daholo izy efatra. “Voatery niverina nidina tao anaty lavaka ny iray tamin’izy efa-dahy. Tsy tafaverina intsony anefa io nirahina io ka nandeha nijery azy tao anaty lavaka ny rahalahiny. Mbola tsy nahenoam-baovao ihany koa itsy fahatelo itsy. Ilay lehilahy fahefatra, zanak’olona mpirahalahy amin’izy telo lahy, no nidina farany sady tavela efa samy tsy nisy aina tahaka an’iretsy telo voalohany”, araka ny fanazavana nampitain’ny loharanom-baovao avy tany Ambatondrazaka.
Nidina tany amin’ny toerana nitrangan’ny loza mihitsy ireo manampahefana sivily sy miaramila ao Ambatondrazaka tamin’ny fitadiavana ny fomba nanavotana azy efa-dahy tao anaty lavaka. “Lalina dia lalina ilay lavaka ka nanahirana ny asa famonjena. Nanomboka tamin’ ny 11 ora teo ho eo vao tafavoaka ny voalohany. Ora iray taorian’ izay mahery kely vao azo ny vatana mangatsiakan’ny fahefatra”, hoy hatrany ny avy amin’ny mpitandro filaminana.
Voalaza fa tsy maintsy hanokatra fanadihadiana momba an’ity raharaha mampalahelo ity ny polisy any an-toerana.